Jemani - ALinks
January 16, 2022 UAntika Kumari Jemani , imisebenzi
Ukufumana umsebenzi eJamani, wonke umntu kufuneka aqale afumane umsebenzi eJamani. Ungajonga umsebenzi naphi na, nokuba uhlala eJamani okanye phesheya. Kuxhomekeke kubuzwe bakho, unokuza eJamani
Iindawo ezi-5 ezizodwa zokutyelela eJamani
January 8, 2022 UMaitri Jha Jemani , izinto zokwenza
Ifunyanwa embindini weYurophu, iJamani namhlanje igcina ezoqoqosho zinamandla kwilizwekazi. Nangona kunjalo iyaziwa kakhulu ngembali yayo yeMfazwe yesibini (II) yeHlabathi kunye nelizwe nangamaxesha akutshanje xa yahlulwe yaya eMpuma kwaye
Iivenkile zokuthenga ezilungileyo eJamani
IJamani intliziyo yeYurophu lilizwe lesixhenxe ngobukhulu eYurophu. IBerlin lilikomkhulu leli lizwe kwaye ilizwe linabemi abangaphezu kwezigidi ezingama-83. IJamani idume ngokuba ne-Oktoberfest yayo, iivenkile zemoto, ibhola, kunye nokuninzi
Uzifumana njani izindlu eJamani?
January 7, 2022 UAntika Kumari Jemani , izindlu
Ngelixa ubunini bezindlu ziphantsi eJamani, malunga neepesenti ezingama-52 zabemi abakhetha indawo yokuhlala, yindlela yotyalo-mali enomtsalane ngenxa yozinzo lwentengiso yepropathi. Nangona kunjalo, kukho izinto ezithile ezibalulekileyo ekufuneka uzikhumbule
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko eJamani?
January 7, 2022 UKaruna Chandna Jemani , ababaleki
Ukufaka isicelo sokukhuphela indawo kusenokude kwaye kube nzima. Yazi Apha ukuba ungasifaka njani isicelo seAsylum eJamani. Inokucacisa njani imeko yaseJamani? Uhlala ixesha elingakanani eJamani kuxhomekeka kwinkqubo yokufaka isicelo. Ukuqala
Iidyunivesithi ezilungileyo kakhulu eJamani
Disemba 18, 2021 UAntika Kumari Jemani , isifundo
IJamani idume ngezifundo kunye nemirhumo yokufunda embalwa. Ilizwe lelinye lawona mazwe angawona anglophone afanelekileyo kwizifundo. Okokuqala, ukuba ufuna ukufunda eJamani kuya kufuneka ujonge kwezona zilungileyo
IJamani iVisa yamaNdiya
Novemba 22, 2021 UAntika Kumari Jemani , ivisa
Jemani, eyaziwa njengeFederal Republic yaseJamani. Iyaziwa ngokubanzi ngenqanaba layo eliphantsi lokungaphangeli kunye nokusilela o kwimisebenzi emininzi. Mininzi imigaqo engqongqo ebekwe ngurhulumente waseJamani yokulawula intswela-ngqesho. Babeke
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eJamani? IiBhanki ezigqwesileyo eJamani
Novemba 2, 2021 UMaitri Jha Jemani , imali
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eJamani? Njengoko usenokuba uyazi, amaJamani alawulwa kakhulu. Ukuvula iakhawunti yebhanki eJamani kuya kufuneka uqokelele amaxwebhu amaninzi kwaye ulandele iinkqubo ezithile. Iinkqubo kunye namaxwebhu afunekayo
Agasti 9, 2021 UAntika Kumari Jemani , ivisa
Kuxhomekeka kwinjongo yokuya kwakho eJamani, unokufaka isicelo kwiindidi ezahlukeneyo zevisa. Uceba ukutyelela iJamani ukuze ufunde okanye usebenze okanye nokuba uhlale apho. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ufake isicelo sevisa
Visa Amazwe aHamba ngokuHamba amaJamani
Juni 27, 2021 IShubham Sharma Jemani
Ngokuhambelana nokukhethwa kwabantu babo ekuhambeni simahla, isalathiso sePasipoti luluhlu lwamazwe aphesheya. Kuxhomekeka kwinani lamazwe abanini bayo abanokuhamba ngaphandle kwe-visa-free, esi sixhobo sihlawula iipasipoti ukusuka ngo-193 (ngo-2021). Imeko kwi